#လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက် #မွန်ပြည်နယ် နယ်လုံဝန်ကြီး ၏ #အတားအစီးများကို ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းေ| democracy for burma
#လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက် #မွန်ပြည်နယ် နယ်လုံဝန်ကြီး ၏ #အတားအစီးများကို ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းေ
tags: 11 Feb 2015, ABFSU, စစ်ကြောင်း, မွန်ပြည်နယ် နယ်, အာင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီ, လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက, Burma, Myanmar, NEWS, NNER, Pre Conditio, students boycott, [ရန်ကုန် ၁၁-၂-၂၀၁
လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ်။
လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ် အရ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများ တောင်းဆိုထားသည့် အချက် (၁၁ ) ချက်လုံး ဆွေးနွေး သဘောတူ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Pre Condition ၉ ချက် အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး နောက်
တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက် ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး၍ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို နောက်ရက်များတွင် ကော်မတီဖွဲ့ ၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် အပ်ပါသည်။
၁၁. ၂. ၁၅
UPDATE: လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက် [ရန်ကုန် ၁၁-၂-၂၀၁၅] မွန်ပြည်နယ် နယ်လုံဝန်ကြီး ၏ အတားအစီးများကို ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်း အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီ . . . .။ (11 Feb 2015)4:45 Pm cr. Ko Thu Ko Kyaw Khant မြေလတ်ကျောင်းသားတွေကို ဘီးလင်းမြို့နယ် သို့ လာပို့ပေးတဲ့ Express ကား ကို ပုဒ်မ ၂၂ နဲ့တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ဒဏ်ငွေ တစ်ထောင်ပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်း သိရှိရပါသည်၊၊ွှ မြေလတ်ကျောင်းသားတွေကို လာပို့တဲ့ ရွှေစင်စကြာင်္ကားကို ဘီလင်းမြို့နယ် ရဲစခန်းက ဖမ်းဆီးထားကြောင်း၊အခု တရားရုံးသို့ ပို့မည်ဟု သိရကြောင်း ဒလ -ရန်ကုန် ကားဇတ် ပေါ်မှာ ၁၁.၂.၂၀၁၅ မော်လမြိုင် ၊ထားဝယ် ဒီမိုကရေစီသပိတ်စစ်ကြောင်း နှင့် သထုံ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပူးပေါင်းကြပါပြီ Share this:TwitterFacebookPrintPinterestRedditLike this:Like Loading...
← MYANMAR #BURMA #WORKER #demonstration #calls for #union, #salary #raises
#MYANMAR #BURMA #groups #protest #white #card #voting in #Yangon →